Myanmar Companies Law | Myanmar Law Center
ဤကဏ္ဍတွင် ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ များကို ဤနေရာတွင် စုစည်း တင်ပြထားပါသည်။
အပိုင်း (၁) – စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်များ
အခန်း(၁) အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်များ ၁။ (က) ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ( ခ ) ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်သတ်မှတ်သည့်နေ့ရက်တွင် စတင်အာဏာတည်စေရမည်။ ( ဂ ) ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည်...
အပိုင်း (၂) – ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း၊ ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း နှင့် အခွင့်အာဏာများ
အခန်း (၂) ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သော ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ၂။ အောက်ပါကုမ္ပဏီများကို ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ မှတ်ပုံတင်နိုင်သည် - (က) အောက်ပါအစုရှယ်ယာဖြင့် တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားနှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခု - (၁)...
အပိုင်း (၃) – ကုမ္ပဏီ၏မတည်ငွေရင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစုရှယ်ယာများ၊ ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများ
အခန်း (၁၁) အစုရှယ်ယာများနှင့် အခြားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အစုရှယ်ယာမတည်ငွေရင်း အစုရှယ်ယာများနှင့် အခြားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအကြောင်း ၆၀။ (က) ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး၏ အစုရှယ်ယာများ သို့မဟုတ် အခြားငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များသည် ကုမ္ပဏီ၏...
အပိုင်း (၄) – စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းခြင်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း နှင့် ကြွေးမြီ တာဝန်ရှိခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ငွေစာရင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း
အခန်း (၁၆) ကုမ္ပဏီရုံးခန်းနှင့် အမည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီရုံးခန်း ၁၄၁။ (က) ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်းအား စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့်နေ့မှစ၍ ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ အကြောင်းကြားမှုများအတွက် လိပ်မူပေးပို့နိုင်မည့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခု ရှိရမည်။...
အပိုင်း (၄) – (၁) ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦး၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ပြုလုပ်ရန်
(၁) ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦး၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ပြုလုပ်ရန် ရေးသားဖော်ပြချက် တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ဌာနမှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အထောက်အထား မပြုဘဲ မှားယွင်းတင်ပြထားသည့် ရေးသားဖော်ပြချက် တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် မှန်ကန်မှုမရှိသည့် ဖော်ပြချက်များသည် အစုရှယ်ယာများ...
အပိုင်း (၅) – ဖျက်သိမ်းခြင်း
အခန်း (၂၆) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားဖျက်သိမ်းခြင်း ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ ၂၉၂။ (က) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား အောက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည် - (၁) တရားရုံးကဖြစ်စေ၊ (၂) ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေ၊ (၃) တရားရုံး၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ဖြစ်စေ။ ( ခ ) ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှု...
အပိုင်း (၅) – ပြစ်ဒဏ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
၄၀၁။ (က) ယခင်ကဖြစ်စေ၊ ယခုဖြစ်စေ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် အခြားအရာရှိများသည် စွပ်စွဲခံရသည့် ပြစ်မှုအား ကျူးလွန်သည့်အချိန်၌ တရားရုံးကဖြစ်စေ၊ တရားရုံး၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒအလျောက်...
အပိုင်း (၆) – မှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် မှတ်ပုံတင်ရုံး၏ အခွင့်အာဏာများ
အခန်း(၂၈) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၊ မှတ်ပုံတင်ရုံး၊ စာရွက်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာများနှင့် အခကြေးငွေများ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ၄၁၉။ (က) ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ်...
အပိုင်း (၇) – တရားစွဲဆိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြစ်မှုများ
အခန်း(၂၉) တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် တရားစွဲဆိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းများ တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ၄၃၂။ ဤဥပဒေအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသောတရားရုံးသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည်...
အပိုင်း (၈) – အထွေထွေ
အခန်း(၃၁) အထွေထွေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ စည်းမျဉ်းများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်များ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ဝေနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ ၄၆၂။ (က) ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ အခြားသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရဖြစ်စေ ရရှိထားသည့် အခွင့်အာဏာ သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်...
PART II – CONSTITUTION, INCORPORATION AND POWERS OF COMPANIES
Division 2: Companies and corporations 2. Companies that may be incorporated The following types of body corporate may be incorporated under this Law: (a)a company limited by shares, which may be either: (i)a private company which may have no more than 50 members (not...
PART I – COMMENCEMENT AND DEFINITIONS
Division 1: Name, commencement and definitions 1.Citation and commencement of this Law and definitions (a)This Law shall be called Myanmar Companies Law. (b)This Law commences on the date of notification determined by the President of the Union. (c)In this Law, unless...
PART III – SHARES AND MATTERS RELATING TO A COMPANY’S CAPITAL
Division 11: Shares and other securities Share Capital 60. Nature of shares and other securities (a)The shares or other securities of any member inacompany shall be moveable property, transferable in the manner provided or permitted by this Law and any other...
PART IV – MANAGEMENT, ADMINISTRATION AND GOVERNANCE; OFFERS OF SECURITIES TO THE PUBLIC; GRANT OF SECURITY BY A COMPANY; MAINTENANCE OF COMPANY ACCOUNTS
Division 16: Office and name 141. Registered office of company (a)A company shall as from the date of its incorporation havearegistered office to which all communications and notices may be addressed. (b)The company need not carry on business in the premises at the...
PART V – WINDING UP
Division 26: Winding upacompany Preliminary 292. Mode of winding up (a)The winding up ofacompany may be either: (i) by the Court; (ii)voluntary; or (iii)subject to the supervision of the Court. (b)The provisions of this Law with respect to winding up apply, unless...
PART VI – THE REGISTRAR, REGISTRATION OFFICE, REGISTRATION OF DOCUMENTS, POWERS OF INSPECTION AND FEES
Division 28: The Registrar, registration office, registration of documents, powers of inspection and fees and removal of companies from the register 419. The Registrar (a)On the commencement of this Law, the Directorate of Investment and Company Administration (and...
PART VII – PROCEEDINGS AND OFFENCES
Division 29: Jurisdiction of the Courts and legal proceedings 432. Jurisdiction of the Courts (a)Subject to other applicable laws, the Court having jurisdiction under this Law shall be the Supreme Court of the Union: Provided that any High Court, District Court or...
Division 31: Miscellaneous provisions 463. Power to issue regulations, notifications and guidelines (a)Without limiting any provision of or power held by any person under this Law or other applicable Law: (i)the Ministry may, with the approval of the Union Government,...